सम्झनाको जटिल "Khatyn": इतिहास, मार्ग को विवरण
सम्झनाको जटिल "Khatyn" बेलारुस को मिन्स्क क्षेत्रमा आज दोस्रो विश्व युद्ध को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्मारक को छ।
स्मारक Khatyn मा - जो महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध समयमा मृत्यु तीन लाख Belarusians एउटा आदर। को टुकडी 54 किलोमिटर बेलारुस मा मिन्स्क को उत्तर-पूर्वमा छ।
को घातक 1943 Khatyn मिन्स्क को उत्तर-पूर्वी मा एक सामान्य बेलारूसी गाउँ थियो पहिले। तर एक जर्मन अधिकारी मृत्यु भएको थियो जो 22 मार्च, 1943 एक शूटिंग सोभियत partisans र नाजीहरूले पछि, शत्रु सेना गाउँमा घेरे।
सशस्त्र जर्मन एक विशाल खलिहान सबै गाउँलेहरू अप बन्द, र त्यसपछि आगो यसलाई सेट गर्नुहोस्। त्यो दिन मा, 160 बारेमा जीवित जलाए तिनीहरूलाई 75 बच्चाहरु बीचमा। यो भयानक दिनमा6मान्छे सुरक्षित गरियो। तिनीहरूमध्ये 56 वर्षीया Iosif कामिस्की थियो। उहाँले आफ्नो घाइते छोराको मृत्यु पाउन सक्षम थियो तर उहाँले यो हात बाट खोसी गर्न व्यवस्थापन भएन। उहाँले भुँडी मा घाउ एक बुलेट, साथै धेरै बल्न थियो।
अब स्मारकका जटिल "Khatyn" छ जो गाउँमा, को इतिहास अद्वितीय छैन। 628 गाउँ र बेलारुस को सानो सहर को द्वितीय विश्व युद्ध बासिन्दाहरू समयमा नाजीहरूले जिउँदै जलाइएको थियो। यो यति सूचीबाट 186 गाउँ कहिल्यै बरामद कि हुन्छ।
सोभियत अधिकारीहरूले गाउँमा को पूर्व साइट मा युद्ध पछि "Khatyn" सम्झनाको erected। यो बेलारूसी देशमा perished भएका सबैलाई को स्मृति मा बनाइएको थियो। को 185 को स्मारक निर्माण लागि गाउँमा यो माटो ल्याएको थियो unreduced। यसरी एक प्रतीकात्मक चिहान सिर्जना गरिएको थियो।
ठाउँ यो भयानक चिहान - त्यसैले Khatyn को 186th गाउँमा भयो। यो स्थान किन पूर्व सोभियत संघ मा सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण मेमोरियल्स एक भएको छ कि छ।
आज "Khatyn" सम्झनाको जटिल के हो?
स्मारकका खोल्ने जुलाई 5, 1969 मा भयो। उहाँले ठीक पूर्व गाउँ को लेआउट जस्तै थियो।
एक आदर Iosifu Kaminskomu र आफ्नो छोरा - परिसर को केन्द्र मा "उद्दंड मानिस" भनिन्छ छ-मीटर कांस्य मुर्ति खडा। उनको देख, परिसर आगंतुकों तीता र हानि को दुखाइ महसुस। एक granary थियो जो hatyntsy स्थापित जलाए जो कालो धातु छत को खलिहान, को साइट मा। त्यहाँ एक शब्द जीवित देखि मृत गर्न सम्बोधन छ जहाँ प्रतीकात्मक पुष्पांजलि स्मृति यसलाई अर्को संग साधारण गम्भीर।
जीवित कागजातहरू अनुसार यो Katyn मा 26 घरहरू थिए ज्ञात छ। यसलाई त्यहाँ, एउटा obelisk छ भित्र घण्टी माथि छ जो चिम्नी, resembling साइट विनाश घरहरुमा आर्किटेक्ट्स, लास मुकुट बनाए। मौन Khatyn क्षेत्र 22 मार्च, 1943 को भयानक घटनाहरू बारेमा मात्र चरा गाइरहेका, तर पनि प्रतिघण्टा रिमाइन्डर Bells उल्लङ्घन गर्छ।
प्रतीकात्मक गाउँ चिहान लागि गाउँमा जलाइएको हुनुपर्छ। यो 185 unrestored गाउँमा देखि पृथ्वी संग चिया ल्याएको छ। तिनीहरूलाई टाढा "शोक को एक पर्खाल।" Erected थियो यसलाई मूल niches संग ठोस ब्लक बनेको छ। तिनीहरूले सबै भन्दा ठूलो मृत्यु शिविरमा र स्थानहरू मान्छे एन सामूहिक मृत्यु जहाँ नाम संग Commemorative प्लेट प्रबन्ध मिलाए।
सम्झनाको जटिल Khatyn, फोटो जो तल हेर्न सक्नुहुन्छ, स्मृति को क्षेत्र समाप्त हुन्छ। हृदय मा तीन सन्टी रूखहरू जीवन प्रतीक भनेर बढ्न। चौथो सन्टी अनन्त ज्वाला बल्न को साइट मा। नजिकैको "जीवन को रूख", 433 गाउँको जसमा सूची हो। एक पटक तिनीहरूले आक्रमणकारिहरुमा द्वारा जलाइएको छ। तर, युद्ध पुनर्निर्माण भएपछि।
2004 मा, एक स्मारक reconstructed थियो।
सम्झनाको जटिल "Khatyn": त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
यो के गर्न जटिल केही आवश्यक छैन यो ऐतिहासिक साइट भ्रमण हो। बस डेस्क र टिकट खरिद जानुहोस्। को गाइड बेलारूसी भूमि मा भएको घटना र लडाई बारेमा भन्नेछु किनभने यो यात्रा फाइदा, तपाईं नरमाइलो हुनेछैन सबै तरिका हुनेछ।
कार द्वारा एक यात्रा - त्यहाँ अर्को तरिका हो। यस मामला मा, तपाईं राजमार्ग एम3(मिन्स्क-Vitebsk) मा जानु पर्छ। , यो माध्यम पारित 54 औं किलोमिटर मा तपाईं जटिल "Khatyn" को नाममा एक सूचक पाउनुहुनेछ।5मी मार्फत उहाँको पछि तपाईं स्मृति र शोक को ठाउँमा पुग्न हुनेछ।
स्मारकका जटिल मा "Khatyn" ठेगाना, हामीलाई परिचित, कुनै। तपाईं एक बन्दोबस्त खोजिरहेको यदि तपाईं तरिका ध्यान गर्नुपर्छ।
तुरुन्तै उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ बन्द दिन भनेर - सोमवार। यस वृत्तचित्र फोटो प्रदर्शनी भ्रमण गर्न चाहनुहुन्छ गर्नेहरूका लागि, कृपया नोट गर्नुहोस् यो मा 10:30 AM खुल्छ र 16:00 मा आफ्नो काम समाप्त गर्ने।
पर्यटकहरू भ्रमण सेवा एकै समयमा सुरु, तर माथि एक घण्टा पहिले, अर्थात् 15:00 मा समाप्त हुन्छ।
विद्यार्थीहरूको लागि प्रवेश टिकट5rubles लागत। 8 rubles - जनसंख्याको अन्य विभाग लागि टिकट।
Khatyn - महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध भयानक घटनाहरू थप प्रमाण हो। आज छोराछोरी थाहा र यस्ता दुःखद घटनाहरू सम्झना गर्न आवश्यक छ। पूर्व सोभियत संघ को केही राजनीतिक प्रतिनिधिको नाजी जर्मनी को सबैभन्दा खराब अपराधको सफाइ खोज्छन्। आधुनिक समाजमा यो दृश्य स्वीकार गर्नुपर्छ! आखिर, संसारमा शान्ति नाजीवाद र नव-नाजीवाद को विचार कहिल्यै नेतृत्व गर्नेछन्।
क्रममा उनको अध्ययन विगतका गल्ती छैन, किनभने आफ्नो बच्चाहरु संग इतिहास थाहा!
Primorsky Krai, "Okunevo"। यो मनोरञ्जन केन्द्र "Okunevo": विवरण, मूल्यहरू, फोटो र समीक्षा
पास Gumbashi, Karachay-Cherkessia: विवरण, यात्रा
विशाल पान्डा लाल बुक बाट: तस्बिर, वर्णन
बेलुन बनेको फोहराहरू कुनै पनि घटना सजाउनु हुनेछ
कसरी "Pokemon जाओ" मा लड्न: बयान
जो5मिनेटमा गर्न सकिन्छ एक फैंसी पोशाक, - बालिका लागि डाकू पोशाक
"हाँस हंट": एक संक्षिप्त विश्लेषण। "हाँस हंट" Vampilov
कसरी सही ढंगले छाया लागू गर्न?
कसरी ड्रिल यार्ड आफ्नो हातमा बनाउन
स्याउको रूख रवि: विविधता को विवरण
Adjara राजधानी - Batumi बिदा